ATN: A for AUNG
ဟနစံနဲ့ ဆင်ဆင် တက်ဂ်လို့ ရေးရပါတယ်။
1. What is your name : Aung
2. A four Letter Word : Aces
3. A boy's Name : Augustine (Hey.... don't tell me it is my name... :)
4. A girl's Name : Agathar
5. An occupation : Appointment-setter
6. A color : Aurora Amber
7. Something you'll wear : Apron (I have to wear it every single day... :)
8. A food : Apple-pie
9. Something found in the bathroom :Air-refresher
10. A place : Australia
11. A reason for being late : All I know is I am really really late... :))
12. Something you'd shout : Anyone! Anywhere! Anything!
14. Something you drink : Army Rum.... :)
16. An animal : Adder
17. A street name : Alfred Circle
18. A type of car : Alfa Romeo (I wish I own one... :)
19. The title ofasong : All I Have To Do Is Dream... :)
20. A verb : Add (Add me, please... on G-talk..... :)
ကဲ... ကိုယ့် အလှည့် ပြီးသွားတော့ ကျန်တဲ့သူတွေ အလှည့်ပေါ့လေ။ တက်ဂ်ရမယ့်သူတွေကို ရှာကြည့်လိုက်တော့ - ဟား.... တွေ့ပြီဗျား ကျနော့် ကျောက်ခဲကြီး... အဲလေ... အကိုကြီး ရွှေရတုမှတ်တမ်း၊ ဆီပုံထဲက အရုပ်တကာကို လျှောက်လျှောက်ဆော့ပြီး အလုပ်နောက်ကျတဲ့ ကျနော့် ညီမ မအယ်၊ အကိုငယ်ရေ့ဆိုပြီး လာလာ နောက်သွား တတ်တဲ့ ညီမငယ် မယ်ကိ၊ ရီစရာတွေ ရေးတတ်တဲ့ ညီငယ် ကိုလူထွေး၊ ညီမငယ် ဖြူစင်ကြယ်၊ ပြီးတော့ ကျနော့်ကို လာလာစတတ်တဲ့ ညီမငယ် ခရေညို၊ ၆ ယောက်ဆို တော်လောက်ပါပြီလေ။ အဲ... နေဦး... သူ့နံမည်ကို Z နဲ့ စတဲ့ ကိုဂျက်လီ (သူက စာရေးကောင်းတယ်... ရီစရာတွေ အရမ်း ရေးတတ်တာ... ခုတော့ Z နဲ့ သူ ဘယ်လိုရေးမလဲလို့ စိတ်ဝင်စားတယ်...း)
Alfa Romeo ကားကြီး မြန်မြန်ဝယ်စီးနိုင်ပါစေ...
A gail'S name ဆိုတာ နားမလည်ဘူး မသိဘူး
ခရေညို အားရင် အမြန်ဆုံးရေးပေးမယ်နော်။
အောင် မလေး တော်
အေ့.... အကိုငယ်ရေ့ 
An animal ကိုမသိလို့ ဒစ်ချင်နာရီဘုတ်အုပ်ကြီး လှန်ကြည့်လိုက်ရသေးသတော့..၊
All we know is u r really really late :D
ကို အောင်ငယ်ကြီးရေ... Add လိ်ုက်ပြီနော်။ အဟီးးးးးးး
ချိုသင်းလဲ အဲဒီသီချင်း အမြဲဆိုတယ်။ တူပါ့..
ဘယ်ရမလဲ။ မြန်မာလို အ နဲ့ရေးရဦးမှာ ...တက်ဂ်ထားသေးတယ် ဆရာအောင်သာငယ်။ ;)
good morning ! who are you and whom are you, i do not know but I must friendship to you .I also myanmar.I read your bloc.thankyou so much for true news.